Wararka - Sida loo qurxiyo dhalooyinka khamriga
Nolosha, waxaan ogaaneynaa inay fududahay soo saarida waxyaabo badan oo bilaa camal ah, taas oo dhalooyin badan oo khamri madhan ay ku badan yihiin. Dad badan ayaa dooran doona inay tuuraan dhalooyinkan khamriga ah ee madhan, laakiin dhab ahaantii, ka dib markay beddelaan dhalooyinkan khamriga ee madhan, waxay noqon karaan qurxinno aad u qurux badan.
1. Buugga dhalada khamriga:
Dhaladaan iska yeelyeelaha ah u bedel buugaagta moodada ah. Waxa aad u baahan tahay: dhalada khamriga, saaxiib kaa caawiya inaad wax cabto, iyo waxyaabo yaryar sida quruurux ama ciid.
2. Nalka dhalada:
Waxaad u baahan tahay waa: dhalo nadiif ah iyo nal batari ku shaqeeya oo ku shaqeeya nalalka cirfiidyada. Way fududahay.
3. Is shubida dhalada biyaha:
Ma leedahay cacti, dhir dhif ah ama dhir kale oo gudaha ah oo u baahan oo keliya biyo mararka qaarkood? Markaad ku dhexjirto ciidda, dhaladan is-waraabinaysa waxay tartiib tartiib ah u qoyn doontaa. Waa nidaam waraabinta “iska indhatira”. Waad isticmaali kartaa xargaha iyo rinjiga rinjiga dhalooyinka, ama waxaad toos u isticmaali kartaa dhalooyin madhan, dhalooyinka biirka ama dhalooyinka adag. Xusuusin: kaliya buuxi 2/3 dhalada biyo, ku dabool furitaanka suulkaaga, ka dibna dhalada geli ciidda. Haddii aad leedahay beer, waxaad ku ridi kartaa dhalooyin si otomaatig ah u waraabiya inta u dhexeysa dhir kasta.
4. Qajaar la cabi karo oo dhalo qajaar ah:
Waxaad khudradda ku dhaansan kartaa dhalo. Waa hadiyad inaad ku muujiso beertaada, qaadashada iyo xirfadahaaga farsamooyinka isla waqtigaas. Waxa aad u baahan tahay: dhalo nadiif ah, khudrad, biyo, milix, khal iyo habka loo yaqaan 'Edgar's Pickle recipe'. Sharaxaad: mar haddii la sameeyo biyaha cusbada, khudaartu waa diyaar, alaabta ceyriinka ah waxaa lagu ridayaa dhalada khamriga, ka dibna loo qaabeeyaa qurxinta.
5. Shumaca Citronella:
Waxa aad u baahan tahay: dhalo nadiif ah, laambad shumac, isku xira 1/2 inji oo leh istaag, teflon cajalad, liitada dhadhanka Tiki iyo aaladda Aquarium Gravel. Sharaxaad: ku shub dhalada dhalada Aquarium Gravel iyo Tiki shidaalka. Ku duub laabatada cajaladda Teflon oo si adag u geli afka dhalada. Ku riix dillaaca isku xiraha iyo ku xir isku xidhka dhalada.
6. Weelasha fudud
Dhaladaan fudud ayaa hadiyad weyn u ah carruurta ama dadka jecel ee u baahan macmacaanka. Waxa aad u baahan tahay: rinji, warqad qorid, cajalad rinji iyo nacnac, digir jelly ama nooca ugu yar ee kuleylaha ah ee loo yaqaan 'Mini marshmallow'. Fiiro gaar ah: marka hore dhig laba xarig oo fidsan cajalad hareeraha dhalada, qiyaastii 3-5 inji oo isu jira. Dhig lakab rinji acrylic ah inta udhaxeysa cajaladda ranjiyeha (inta ka hartay sabuuradda nuuraddu waa hagaag) una daa inay qalajiso saacad. Mar kale mari mari oo u daa qalalan ilaa 1-3 saacadood - ama ka sii wanaagsan, habeen. Si tartiib ah cajaladda uga siib dhalada, xarfaha ku dhaji dhalada, kuna buuxi nacnaca aad dooratay.